काठमाडौं, ७ असार । समाजवादी पार्टीका नेताहरुको बुझाई छ- राजपासँगको एकताको लागि मुख्य दुई अप्ठ्यारा छन् । १. उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोबीचको सम्बन्ध । २. राजनीतिक कार्यदिशाको फरक ।
यी दुई अप्ठ्याराका कारण तत्काल दुई पार्टीबीचको एकता हुन मुस्किल रहेको समाजवादी पार्टीका एक नेता सुनाउँछन् ।
तर, शुक्रबार समाजवादी पार्टीका उच्च तहका नेताहरुको अनुमानविपरित समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र महतोबीच जनकपुरधाममा गोप्य वार्ता भयो । त्यो पनि सामान्य संवाद होइन, अढाई घण्टा लामो ।
मधेस आन्दोलनताका यी दुई नेताबीच मधेस राजनीतिको क्रममा सम्बन्धमा समस्या आएको निकटस्थहरुको बुझाई छ । नयाँ शक्ति र फोरम एकताको बेला राजपाका नेताहरुले सँगसँगै एकता गर्नुपर्नेमा अडान लिएका थिए । त्यतिबेला पनि उपेन्द्रले राजपासँगको एकतालाई प्राथमिकतामा राखेका थिएनन् । समाजवादी पार्टीका एक नेता भन्छन्, ‘उपेन्द्रजी राजेन्द्र महतोलाई अलगथलग बनाएर राजपाका अरु नेताहरुलाई समाजवादी पार्टीमा भित्र्याउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरुको यही ‘इगो’को समस्या पार्टी एकीकरणको लागि तत्कालको समस्या हो ।’
ती नेताको बुझाई दुई पार्टी एकताको अर्को समस्या हो- राजनीतिक कार्यदिशा । सद्भावना पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरु समाजवाद सुन्न पनि चाहँदैनन् । कांग्रेस पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरुको पनि राजनीतिक बुझाई फरक छ । शासकीय स्वरुपमा पनि दुई पार्टीबीच फरक बुझाई छ । राजपा संसदीय व्यवस्थाकै निरन्तरता चाहन्छ भने समाजवादी पार्टी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख र समानुपातिक संसदको पक्षमा छ ।
कतिपय नेताहरु राजपामा भएका ६ अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरु र समाजवादी पार्टीका नेताहरुको व्यवस्थापन पनि एकताका लागि चुनौती बन्ने बताउँछन् । समाजवादी पार्टीका एक पदाधिकारी भने नेताको व्यवस्थापन खासै ठूलो समस्या नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भाजपाले अध्यक्षमण्डलकै प्रणालीबाट चलाइरहेको छ । डा. भट्टराई सर्वमान्य नेता हुन्छन् र कार्यकारी पदमा रोटेसनमा नेतृत्व गर्न सकिन्छ । अध्यक्षमै दावी गर्ने धेरै नेता पनि हुनुहुन्न । यो खासै ठूलो समस्या बन्दैन ।’
नेताहरुको यी र यस्तै बुझाईहरुलाई पन्छाउँदै शुक्रबार जनकपुरधाममा यादव र महतोले दुई पार्टीबीच एकीकरणको विषयमा छलफल गरे ।
त्यसो त, पार्टी एकताको कुरा कुनै नयाँ प्रसंग होइन । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीचको एकीकरणभन्दा अगावैदेखि राजपासँगको एकीकरणको लागि छलफल हुँदै आएको छ । तर, कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन नसक्नुका पछाडि केही नेताहरु माथिकै समस्याहरुलाई जोड दिन्छन् ।
समाजवादी पार्टीका अर्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एकताका लागि निकै सकरात्मक छन् । फोरम र नयाँ शक्तिकै एकताको सन्दर्भमा पनि भट्टराईले एकताका लागि पहल गरेका थिए । त्यतिबेला अर्का अध्यक्ष यादवकै अनिच्छाका कारण एकता हुन नसकेको नेताहरुको बुझाई छ । यादवको तर्क थियो, ‘भुईंको टिप्दा पोल्टाको नपोखियोस् । पहिला हाम्रो एकता टुंग्याऊँ ।’
महतो निकट एक नेताका अनुसार जनकपुरधाममा भएको शुक्रबारको छलफलले यादव र महतो दुवै पार्टी एकीकरणका लागि सहमति बिन्दूको नजिक पुगेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस यादव र महतोको लागि अवसर बन्यो । योग दिवसले मञ्चमा सँगै बनाइदिएपछि उनीहरुले छलफल अगाडि बढाएका थिए । औपचारिक कार्यक्रम सकिएपछि दुवै नेताले जनकपुरधामस्थित एक होटलमा साढे दुई घण्टा लामो गोप्य छलफल गरेका महतो निकटका एक नेताले जानकारी दिए ।
बैठकमा एकीकरणका लागि छिट्टै नै कार्यविधि तय गरी अघि बढ्ने सहमति भएको बताइएको छ । छलफलमा प्रदेश दुईमा भइरहेको सत्ता साझेदारी र मन्त्रिमण्डल परिवर्तनको बारेमा पनि छलफल भएको राजपाका एक नेताले जानकारी दिए ।